Iqhosha leMouse lasekunene-iGeofumadas
Epreli, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Kwimeko ye-AutoCAD, yayiqhelekile into yokusebenzisa iqhosha lasekunene ukwenza lo myalelo kwakhona. Kwimeko yeMicrostation isetyenziswa kakhulu kwakhona umyalelo, ulingana nentloko esc kwi-AutoCAD.
Kodwa ukusuka kwi-AutoCAD 2000, ukuba ibhokisi yencoko yomxholo ivumela ukuba sikhethe ezinye iindlela, into engacatshanganga.
Ukwenza oku, zombini iinkqubo ziphunyeze ukhetho apho ibhokisi yencoko yencoko inokuqaliswa ngendlela ebuhlungu, oko kukuthi, isoloko isetyenziselwa umsebenzi othile kodwa ibhokisi yomxholo ingafakwa kwakhona.
Xa sisebenzisa le nkqubo okokuqala, xa siqala ukunqakraza ekunene iyasibuza ukuba silindele ukusebenzisa iqhosha ukuseta kwakhona umyalelo okanye ukwenza ibhokisi yencoko yababini (Oku kukwiinguqulelo zeXM okanye zeV8i). Isiko lisenza sisebenzise ukhetho lokuqala, kodwa ngekhe sazi ukuba siyibuyisela njani.
Oku kuxazululwe ngale ndlela:
Indawo yokusebenza> ukhetho> Imput.
Apho sinokukhethwa kwindlela eninzi, phakathi kwabo ungabona ukuba umyalelo wokusetha kabusha ungasetyenziswa ngokucwangcisa i-esc, oku kulabo balahlekelwa yi-AutoCAD kunye nombhobho wesithathu.
Ngoku, ukuba oko sifuna iqhosha elungileyo ukuvula ibhokisi yencoko-bhokisi rhoqo, ngoko sikhetha
Yenza kwakhona iMenu yokuPhumela, ngenye indlela Cofa
Ukuba sifuna ukuba le nto ihlale isetyenziselwa ukusetha kwakhona umyalelo, ngoko sikhetha enye indlela Cinezela kwaye ubambe. Ke apha ngezantsi ukhetha ukuba lingakanani ixesha elifunekayo ukuze siyisebenzise, ​​oku kuhamba ngebar, kwaye endaweni yokwenza ngamawakawaka wesibini ekungekho mntu unokucinga ngawo, kwenziwa ngokulingana namalungu angama-60 omzuzwana. Ke ukuba ubaleka ukuya kwi-15 iyakuba yikota yesibini.
Yaye ke, ukuba ndicofa ngokufanelekileyo, mna ku hlaziywa Umyalelo, ukuba unqakraza iqhosha kodwa cinezela kwaye ubambe, ndibona ibhokisi yencoko kunye nemithetho eqhelekileyo okanye umongo womyalelo osetyenziswayo.
Ukusebenzisa i-Civil 3D kwenza kube nzima ukufumana Izixhobo> iinketho, ngoko umyalelo unokuthi ufakwe kumdala: iinketho kwaye senza njalo ukungena
Iinokuqwalaselwa, akukho nto ngaphaya kwexesha eli li-millisecond.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Lungisa idatha ngokusekelwe kwiseshoni echanekileyo
Post Next Imisele ezivela polylines (Inyathelo 1)Okulandelayo »